အကောင်းဆုံး BM603-S-3 ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Gaoji
၂။ ထုတ်လုပ်မှုအထူ - ၁၆ မီလီမီတာ၊
3. အမြင့်ဆုံးလာကြတယ်: Ф32;
2. အများဆုံးအရွယ်အစား: 16 * 260mm;
3. အများဆုံး output ကိုအင်အား: 600KN ။
လာကြတယ်ယူနစ်ကော်လံဘောင်ချမှတ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အင်အားကိုထမ်း, ပုံပျက်သောမရှိဘဲရေရှည်အသုံးပြုမှုကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။ သေတွင်းမှထိုးစက်ကိုအပေါက်ဖောက်ခြင်းသည်တိကျမှန်ကန်ပြီးသက်တမ်းရှည်စေမည့်ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အလှည့်ကျအပေါက်၊ ရှည်လျားသောပတ် ၀ န်းကျင်၊ စတုရန်းအပေါက်၊
ညှပ်ယူနစ်သည်ဓားအတွက်စွမ်းအင်ပိုမိုပေးနိုင်မည့်ကော်လံဘောင်ကိုအသုံးပြုသည်။ အပေါ်နှင့်အောက်ပိုင်းကိုဒေါင်လိုက်တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ခုတည်းသောညှပ်စနစ်သည် kerf ကိုအမှိုက်သရိုက်များမရှိအောင်သေချာစေသည်။
အလွှာငါ: 1500 * 1500အလွှာ II ကို: 840 * 370 1800 ၁၁.၃၇ 3803* 31.5 PLC + CNCကောင်းကင်တမန်ကွေး
လာကြတယ်ယူနစ် ကြေးနီ / လူမီနီယမ် ∅32 600
ညှပ်ယူနစ် ၁၆ * ၂၆၀ (တစ်ချိန်တည်းဆံပင်ညှပ်ခြင်း) ၁၆ * ၂၆၀ (လက်သီးဖြင့်ထိုးညှပ်ခြင်း) 600
ကွေးယူနစ် 16 * 260 (ဒေါင်လိုက်ကွေး) 12 * 120 (အလျားလိုက်ကွေး) 350